बुधवार, कार्तिक २०, २०७६ निर्मल श्रेष्ठ
अघिल्लो अंकबाट क्रमश:
जीतगढी ईट, ढुङ्गा, माटो र सूर्खीको थुप्रो मात्र होइन । नेपालीहरुको रगत पसिनासँग वीरता, धीरता र राष्ट्रियता साटिएको र कम्पनी सरकारको साम्राज्यवादी पाइलाहरु थामिएको बिन्दू ‘जीतगढी’ हो । अझ खासै भन्नुपर्दा विश्व विजयको शंखनाद गर्ने कम्पनी सरकारले यस्तो पहाडी कन्दरामा पनि आफूलाई मेख मार्ने शक्ति रहेको महशुस गरेको विन्दु नै ‘जीतगढी’ हो ।
रुपन्देही जिल्ला बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १ मा अवस्थित पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्वको गढीलाई ‘जीतआड (गढी)’ भनेर चिनिन्छ । यो गढी तिनाउ नदीको दायाँ किनारमा अवस्थित छ । उजिरसिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको फौजले पराक्रम र चलाकी देखाई यसै गढीमा बसेर कम्पनी सरकारको फौजलाई हराएकोले यस गढीलाई ‘जीतगढी’ भनिएको जनश्रुति रहेको छ । वि.सं. १९६३ मा पृथ्वीपाल सेनको पालामा सेनवंशको शासन अन्त्य भई पाल्पाराज्य नेपाल अधिराज्यमा विलय हुन गयोे ।
वि.सं. १८७१ को नेपाल र कम्पनी सरकारबीच भएको युद्धताका‘जीतगढी’को सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । उजिरसिंह थापापाल्पाको तैनाथवाला भएर आउनुभन्दा पहिले नै त्यहाँ गढी रहेको देखिन्छ । यस गढी सेनहरुको पालामा बनेको स्पष्ट हुन्छ ।
चुरे पर्वतको काखमा र तिनाउ खोलाकोपश्चिम किनारमा अवस्थित यो गढी १६ औं शताब्दीतिर सेनकालमा निर्माण भएको मानिएको छ । केही इतिहासकारहरुको मुकुन्दसेन प्रथमले यो गढीको निर्माण गरेको भनाई रहेको छ । सेनहरुको मूल राजधानी पाल्पा हुनुका साथै पाल्पा प्रवेश गर्ने मूल बाटो भएकोले सुरक्षाको खातिर यो गढी को निर्माण भएको देखिन्छ । यसको साथै मध्यकालमा दक्षिणतिरबाट पाल्पा प्रवेश गर्ने यो एउटा प्रमुख मार्ग भएकोले सेनवंशकाशासकहरुले यस ठाउँमा गढी बनाएको हुन सक्छ । अहिले यो खण्डहरको रुपमा रहेको छ ।
पाँच सय वर्गफिट इलाकामा फैलिएको यो गढी पूर्वपश्चिम लम्वाई २०५ फिट छ र चौडाई करिव ५५ फिट छ । गढीको जग निकै फराकिलो छ र गढीको गारो क्रमशः माथितिर साँगुरो हुँदै गईराखेको छ । गढीको भित्री भागबाट पर्खालको उचाई ४ फुट ३ इन्च र १० इन्च चौडा छ । भित्ताको मोटाई ८ फुट ४ इन्च छ । गढीको भित्री भाग खुल्ला छ । यो गढीको निर्माण ईटा र सुर्खीको प्रयोगबाट गरिएको छ । करीव बाह्रलाखदेखि पन्ध्रलाख ईटा प्रयोग भएका यस गढीको ईटाहरुका कोही १०’’ वर्गाकारको ईटा प्रयोग भएको छ भने कोही ईटाहरुको लम्बाई चौडाई क्रमशः ८.६’’, ६’’x२’’ रहेका छन् ।
गढीको निर्माणशैली प्राचीन गढी निर्माणशैलीमा आधारित देखिन्छ । गढीको वरिपरि युद्ध गर्नको सुविधाको लागि विभिन्न किसिमका चरहरु बनाइएको छ भने गढीमा शत्रुले आक्रमण गरेको बेला प्रत्याक्रमण गर्न अर्धगोलाकार भएकोबुर्जा निर्माण गरिएको छ । वुर्जाहरुमा चरहरु रहेका छन् । यी चरहरु बन्दुक छिराई आक्रमण गर्न सजिलो हुने हिसाबले निर्माण गरिएको छ । गढीको वरिपरि गारोमा बन्दुक छिराई प्रहार गर्ने प्वालहरु पनिबनाइएको छ । ठाउँ ठाउँमा तोपको मोहरी सोभ्mयाउने ठाउँहरु रहेकाछन् ।
गढीको भित्तामा भएका प्वालहरु भित्रपट्टी सानो र बाहिरपट्टि ठूलो हुने गरि बनाइएका छन् । संभवत् बाहिरबाट गोली प्रहार गर्दा भित्र नछिर्ने हिसाबले यस्ता प्वालहरु डिजाइन गरिएको छ । किल्लाको भित्री भागमा किल्लाको गारो सँगसँगै सानो गारो निर्माण गरिएको छ । संभवत त्यो गारो उभिएर गढीका भित्ताहरुमा प्वालहरुमा बन्दुक राखी लड्न सजिलो हुने हिसाबले बनाइएको हो । गढीको भित्री भागमा जमिनको सतहभन्दा माथि उठेका पर्खालहरु उत्खनन पछि देखिएका छन् ।
वि.सं. २०५२ सालमा पुरातत्व विभागले गढी संरक्षण गर्ने क्रममा गढीको पर्खालको बीच भागको उत्तरतर्फ एउटा Trial Treach लिंदा पुरिएको पर्खालको पेटी भेटिएको थियो । यसका साथ साथै पेटीको दायाँ बायाँ सिंढीहरु पनि पाइएका छन् ।
यो गढीको प्राचीन स्वरुप कस्तो थियो यकिनका साथ भन्न सकिदैन । साँच्चै नै भन्नुपर्दाकर्णेल उजीरसिंह थापा कै समयमा यो गढीको स्वरुप कस्तो थियो अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । संभवत उजीरसिंह थापाको समयकालसम्म यो गढी पूर्ण रुपमा थियो । तर वि.सं. १८७३ पछि क्रमशः यो गढीको महत्व र प्रयोग नभएकोले उपेक्षित हुँदै गयो । समयको अन्तरालसँगै मानव अतिक्रमण र प्रकृति प्रकोपलाई खेप्दैे जीतगढी हाल ५०% भाग मात्र बाँकी रहेको छ । गढीको धेरै जसो भाग नाश भइसकेको छ ।
आधुनिकीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव यस गढीको वरिपरिको परिवेशले देखिन्छ । मध्यकालीन नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्ने सेनवंशी राजाहरुको पालामा बनेको यो गढीले राज्यविस्तारको बेलामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसरी नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान राख्दै आएको यस गढीले ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको छ । अब यस गढीको गौरवमय इतिहासलाई जोगाउँदै नेपालीको स्पन्दनसँग साटिएको देशको रक्तसंचारको रुपमा रहेको राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नु पर्ने वेला आएको छ । अर्कोतिर यस वर्षलाई पर्यटन वर्षको रुपमा अगाडि सार्दै छौं जीतगढीलाई पर्यटनको कोशेढुङ्गाको रपमा स्थापित गर्नु पर्ने खाँचो छ ।
जीतगढी भित्रको राष्ट्रियता
प्रकृतिसँग पौठेजोरी खेल्दै सामूहिक उत्पादन, सामूहिक उपभोग र सामूहिक जीवनबाट मानिसहरुको समूह, झुण्ड हुँदै कविलाहरुमा विकास हुन गयो । यसरी विभिन्न समूह, झुण्ड र कविलाहरुमा मानिसहरु बाँडिए, मानिसलाई पहिले प्रकृतिसँग मात्र जुझ्नु पर्ने थियो भने विभिन्न समूह, झुण्ड र कविलाहरुको विकाससंगै विभिन्न समूह, झुण्ड र कविलाहरुका बीच खेती र शिकारको लागि जुझ्नु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो ।
यो स्थितिमा समूह, झुण्ड र कविलाको खाँचो मानिसलाई झनै हुन थाल्यो । एकअर्काको बीचमा ठूला ठूला झड्पहरु हुन थाले ।संघर्षमा समूह, झुण्ड र कविलाहरु नाश हुने र समूह, झुण्ड र कविलाहरुको क्षेत्र विस्तार हुने क्रम पनि जारी रह्यो । यसरी समूह, झुण्ड र कविलाबाट गण र राज्यको विकास हुँदै गयो । यही विकास क्रममा मानिसहरु दुई वर्गमा बाँडिन थाल्यो । स्ववर्ग र परवर्गमा ।
राज्यमा सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक सीमाहरु कोरिन थाले । त्यही सीमारेखा भित्र प्रकृति र मानिसका बीच भावनात्मक समरुपता र पारस्परिक सापेक्षताको फलस्वरुप राज्यको मौलिकता भित्र राष्ट्रियताको खोजी हुन थाल्यो । एकातिर राज्यभित्र राष्ट्रियताको महशुस र अर्कोतिर सामूहिक उत्पादन, सामूहिक उपभोग र सामूहिक जीवनलाई निर्देशित गर्नु प्रजातन्त्रको आवश्यकताको महशुस गर्न थालियो । जति जति मानिसले हरेक फाँटमा विकास गर्न थाल्यो तब राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सीमा र व्याख्या फराकिलो हँुदै गयो ।
कहिले कहिले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको व्याख्या आफ्नो अनूकुल पनि हुन थाल्यो भने समय समयमा त्यही व्याख्याले बहुसंख्यक निमुखाहरुलाई पाखा लगाउने काम पनि भयो । यही विषयलाई लिएर ठूला ठूला संघर्षहरु भएको विश्वमा थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा आएर पनि तेस्रो विश्वका थुप्रै मुलुकहरुमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विषयलाई लिएर हुने व्याख्यागत समस्याहरु ज्यूँ का त्यूँ रहेका छन् । प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि राष्ट्रलाई कस्तो खालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको खाँचो हो त ? हरेक फाँटमा पराश्रित भएर पहिरनले मात्र राष्ट्रियताको मजबुन खोज्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् रोजगार जस्ता सामाजिक सुरक्षालाई नजरअन्दाज गर्दै बोल्न पाइने स्वतन्त्रता भित्र प्रजातन्त्र खोज्नु त्यो निरर्थक हुन जान्छ ।
राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बीच यस्तो अन्योन्याश्रित सम्वन्ध रहेको छ जसलाई अलग राखेर हेर्न सकिदैन तर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको यी पक्षहरुलाई आज जुन अलग अलग राख्ने गरिएको भनौं फरक फरक गरी हेर्ने गरिएको छ त्यो त्यति सान्दर्भिक अहिले छैन । राष्ट्रियतालाई अलग राखेर प्रजातन्त्रलाई मात्र हेरिन्छ भने प्रजातन्त्र लङ्गडो हुन्छ भने प्रजातन्त्रलाई अलग राखेर राष्ट्रियता खोज्ने प्रयत्न गरिन्छ भने त्यो निरर्थक हुन्छ । राष्ट्रियतालाई मात्र महत्व दिएर राष्ट्रियताको अभावमा प्रजातन्त्रको विकास स्वतः हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो भने त्यो एकाङ्गी हुन जान्छ । त्यो एकाङ्गीपनले जनभावनालाई एकीकृत गर्न हम्मे हम्मे पर्न जान्छ । यसै गरी प्रजातन्त्रको विकास भए राष्ट्रियता स्वतः स्फूर्त हुन्छ भन्ने मान्यता रह्यो भने त्यहाँ अधिनायकवादको जन्म हुने संभावना प्रशस्त रहन्छ । त्यसकारण यी दुई पाटोलाई अलग अलग गरी हेर्न सकिदैन ।
‘…Strange, -is it not_ that battles, martyrs, blood, even assassination, should so condense–perhaps only really lastingly condense–a Nationality राष्ट्रियताको सवालमा Geoffrey C. Ward ले सबैभन्दा पछिल्लो महत्वपूर्ण आयाम भनेको राष्ट्रियता हो भनेका छन् । राष्ट्रियताभन्दा ठूलो त्यस देशका जनताको अरु कुनै ठूलो हुँदैन । राष्ट्रियतामा राष्ट्रको पहिचान खामिएको हुन्छ । यसरी नै ‘तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्तय ।’ अर्थात आफ्नो राष्ट्रिय चिनारी बिनाका जाति खोलाले छेउ लगाएका ढुंगामुढा समान हुन भनेर ऋग्वेदमा उल्लेखित छ । यसकारणले राष्ट्रियता बिना मानिसकोे पहिचान हुन सक्दैन । बेला बखतमा जब नेपालीहरुको वुजुद माथि, अस्मिता माथि खेलवाड हुन थाल्छ अनि नेपाली मनमा चिसिक्क पर्ने गर्छ अनि निकै गम्भीरताका साथ राष्ट्रियताको कुरा उठने गर्छ ।
विभिन्न कोणबाट राष्ट्रियताको व्याख्या हुने गर्छ र यस विषयमा बहस चल्न पनि पर्दछ । रोम्यान्टिक नेशन्यालिजम् होइन, पोलिटिकल नेशन्यालिजम्को खाँचो छ ।
अर्थवादमा ढुङ्गाको पनि सुन्दर डुङ्गा बन्न सक्दछ । सुन्दर बुट्टाहरु कुदिन सक्छ तर पानीमा तैरिन सक्दैन । अब जीतगढीको गौरवमय इतिहासलाई हृदयङ्गम गरी हामीले पूर्खाको रगत पसिनाले आर्जेको वीरता, धीरता र राष्ट्रियताको डोबमा टेकेर बृहत् राष्ट्रियताको जर्गेना गर्नु परेको छ । साथै गौरबमय इतिहासलाई नयाँ पुस्ताको पोल्टोमा सुम्पिनु पर्ने भएको छ ।
एङ्ग्लो नेपाल वार, ऐतिहासिक जीतगढी र राष्ट्रियता
गोर्खाल्याण्ड दर्पण : पूर्वार्ध
शाहकालीन ऐतिहासिक चिट्ठी पत्र संग्रह भाग १,२
श्री ५ वडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको जीवनी
हिन्दू राष्ट्र नेपाल
नेपाल टिस्टादेखि सतलजसम्म
शाही नेपाली सेनाको इतिहास
नेपालको सैनिक इतिहास
प्राचीन भारत– एक रुपरेखा
देवभूमि भारत एवं आध्यात्मिक नेपाल– पहला भाग
भारतीय संस्कृति के स्रोत
भारत और विदेशो मे बौद्ध धर्म प्रसारक
अठारहवी सदीके जमीदार
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन एवम् संवैधानिक विकास
Nepal Growth of Nation
History of the DEHRA DUN Valley
प्रकाशित मिति: बुधवार, कार्तिक २०, २०७६, ०४:२१:३२
जसले पञ्चायतलाई जनताका कुरा सुनाउन बम पड्काए विगतका चुनावमा ह्याट्रिक गरे, पछिल्लो समय ओझेल परे
आइतवार, जेठ ११, २०७७ सुदीप भण्डारी
प्रजातन्त्र पुन:स्थापना पछिको पहिलो आम चुनावमा २०४८ मा उनका प्रतिस्पर्धी थिए तत्कालीन नेकपा एमालेका भीमनारायण थारु । एमालेको चुनाबी भाषण, कुराकानीमा एउटा चर्चा हुने गर्दथ्यो–रुपन्देही १ को चुनाव महाभारतका पाण्डव र कौरवबीचको लडाई हो, पाण्डवको पक्षबाट भीम र कौरबको पक्षबाट दुर्योधन लड्दैछन्, आखिर जित त पाण्डव पक्षका भिमकै हुन्छ । तर चुनाव महाभारतको लडाइ जस्तो रहेन । दुर्योधनले भीमलाई पराजित गरे । पुरा पढ्नुहोस्
बुुटवलको अस्पतालबाट १० जना कोरोनामुक्त भएर घर फर्किए
शनिवार, जेठ १०, २०७७ लुम्बिनी टाइम्स
बुुटवल- बुुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गराईरहेका १० जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्